Raha te hanatsoaka hevitra, dia izao: Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Day-by-Day > Manaova fehin-teny
“Aza mitsara ny hafa, dia tsy ho tsaraina koa ianareo! Aza mitsara olona dia tsy ho tsaraina koa ianao! Raha vonona hamela ny heloky ny hafa ianareo, dia ho voavela heloka koa.” ( Lioka 6:37 , Fanantenana ho an’ny rehetra ).
Tao amin'ny fotoam-pivavahan'ny ankizy dia nampianarina momba ny tsara sy ny ratsy. Nanontany ny tompon'andraikitra: "Raha maka ny kitapom-bolan'ny lehilahy avy ao anaty paosin'ny palitao aho, inona aho?" Nanangana ny tanany i Little Tom ary nitsiky tamin'ny fomba diso ary nibebaka: "Vadinao izy avy eo!"
Tianao ve ny hanaovako hoe "mpangalatra" hamaly? Indraindray mila mila fanazavana kely kokoa isika alohan'ny handraisana fanapahan-kevitra. Mampitandrina ny Ohabolana 18, 13 hoe: "Izay mamaly alohan'ny hihainoany dia mampiseho ny hadalany sy manao ny tenany ho adala."
Tsy maintsy mahatsiaro isika fa mahalala ny zava-misy rehetra ary tsy maintsy atao fanitsiana izy ireo. Ny Matio 18, 16 dia milaza fa ny zavatra iray dia azo nohamafisin'ny vavolombelona roa na telo, izany hoe samy tokony hiteny ny andaniny roa.
Na dia efa nanangona ny zava-misy rehetra aza isika dia tsy tokony hisaina an'izany na tsy misy fisalasalana aza.
Aoka hotsaroantsika 1. Samoela 16:7 : “Ny olona mijery izay eo imasony, fa Jehovah kosa mijery ny fo.” Tokony hieritreritra ny Matio 7:2 koa isika hoe: “... araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo. ..."
Na ny zava-misy aza dia mety hiteraka fanatsoahan-kevitra diso. Ny fiainana dia tsy foana izay vinavinanay voalohany, satria ny tantara kely asehontsika antsika hatrany am-piandohana. Raha mitsotra amin'ny fehin-kevitra isika dia mora mahamenatra ary mety miteraka tsy rariny sy manimba ny hafa.
Vavaka: Ampio izahay tsy hitsofoka amin'ny fehin-kevitra, ry Ray any an-danitra, fa handray fanapahan-kevitra mahitsy sy mahitsy, maneho famindram-po ary tsy te-hihoatra ny fisalasalana rehetra, Amena.